Ny efi-trano dia ny toerana tena no mandany ny fotoanantsika, nefa koa tsy mitady ny tsinontsinona indrindra raha ny Decorating. ankehitriny, vola mety ho antony manan-danja! Ireto misy toro-hevitra lehibe noho ny brightening ambony ny toerana malalaka tsy manam-bola mihitsy!
1.nanova! Nisy fandaharana vaovao vaovao mahatonga ny efitrano foana hahatsapa vaovao. Aza matahotra ny manandrana fijery vaovao ho an'ny fanaka mametraka ny fandrianao amin'ny diagonal, na mahitsy eo afovoan-trano!
2. Search for tava ny ho mpantsaka, lamban-databatra, na pillowcases izay fankasitrahana ny loko rafitra.
Afaka mampiasa zavatra izay efa manana ny hanalefahana ny mpamboatra ambony, na ny sisin'ny ny nightstand, na angamba shawl mametraka tsara tarehy eo am-pototry ny fandriana. Raha toa ka efa manana manary ondana eo ny fandrianao (raha tsy, tonga ny fotoana mba hangalatra azy ireo avy tamin'ny efitra hafa!) dia azonao atao ny mamatotra ireo lamba manodidina ny ondana vaovao ho an'ny maso, sy marina fiarovana Pin izany in indray.
Jelly Bean Plant (Sedum rubrotinctum) (sary: Wikipedia)
3. hanampy fototra ny trano. Jereo manodidina an-tranonao mba hahitana raha efa misy ny iray amin'ireo zavamaniry dia ho sambatra kokoa ao amin'ny efitra fatoriana, dia mihetsika izany teo! Raha toa ka tsy mahita ny fototra vonona ho famindran-toerana, mahatonga ny olona iray! Maro ny zavamaniry efa lehibe azo avy amin'ny hitetika, na ny efa misy houseplants, ny namana iray dia mety handefa anareo nanapaka, na ivelan'ny trano misy zavamaniry.
Ivy ary maro alokaloka groundcovers Tena tsara houseplants. Azonao atao mihitsy aza ny fahazazany Velombelomy hatrany somary ary hitombo ny voapaika ovy, mananasy, na karaoty tampon amin'ny fiantraikany! Fa fitoeran, hijery ao an-dakozia hekenao.
Old teapots sy ny kaopy, fitaratra vilia baolina, na dia vilia fanaova afaka tsy manam-paharoa kaontenera.
4. Add fahatsiarovana ny trano. I foana ny sary tsirairay ny ankizy raha mbola kely manaraka am-pandrianako, ary mahatonga ahy mitsiky foana. Ahoana ny mihantona ny fampakaram-bady efitra lamba avy amin'ny headboard, na hanisy ny fanasana fampakaram-bady na antitra fitiavana taratasy?
5.Add hanitry. Raha toa ka tsy manana potpourri na ditin-kazo manitra tao an-trano, notombohina volomboasary ny sasany peels ary hamela ho maina, dia afangaro amin'ny mamy na inona na inona zava-manitra ianao ao an-cupboard. (Izany ihany no maka fiantraikany, manandrana kanelina, sakamalaho, na allspice.) Apetraho ny potpourri misokatra amin'ny vilia eo amin'ny toerana sy ny aingam-panahy freshen!
Taty aoriana amin'ny fahavaratra, ho azo antoka ny ahitana voninkazo ao amin'ny efitrano, raha tsy manana raozy na voninkazo manitra ao an-tokotany, daisies amoron-dalana dia afaka manimbolo be koa!
Vitsivitsy fanovana madinika, tsy manam-bola anjara, ary tsaratsara kokoa, toerana tsara kokoa ho anao ny manomboka sy mifarana ny andro tsirairay!
Inona no Azonao Atao Mianara amin'ny fampidirana Home Interior Summer Colors
82158	48 Bedroom, Business, Flower, Horticulture, voninkazo, Plant, fiantsenana, hanipy ondana
← Misotro Coffee Mety Ahenao Mamono Tena Risk! Amboadia’ Midradradradra Azo ID'd ny Computer →